Shirkada Isgaadhsiinta Karel oo ka Qayb Galaysa Suuqa Ethiopia – Rasaasa News
Shirkada Turkiga, ee la yidhaahdo Karel, ayaa salka loo dhigay in ay ka hawl gasho suuqa isgaadhsiinta ee Ethiopia. Shiradu waxay aad u xiisaynaysaa in ay maal gashato suuqa isgaadhsiinta ee Ethiopia oo ay haystaan dhawr shirkado kaliya, sidaas waxaa laga soo xigtay Umut Oner maamulaha xisaabaha Shirkada Karel.
Karel waa shirkada gaar loo leeyahay oo samaysa qalabka laymanka telefoonka gaarka ah lagala socon karo kolka la isticmaalayo iyada oosan ogayn isticmaaluhu [Private Branch Exchange (PBX)]. Waa shirkad si caalamiya loogu aqoonsaday soo saarida qalabka isgaadhsiinta. Shirkadu waxay ku rajo wayn tahay in ay keento alada ku hadalka internet-ka iyo alada layska arko oo lagu xidhi doono suuqyada Ethiopia [closed circuit tv].
Shirkado yar oo xag farsamada kombutarada ah, ayaa kula heshiiyey shirkada Karel in ay qalabkeeda ku iibiyaan suuqyada Ethiopia. Karel waxay siin suuqyada Ethiopia qalabkeeda PBX oo ay ku jiraan 32,000 oo caawin doona hanaanka shaqo ee khadadka telefoonada.
Qalabka [PBX] ayaa hore uga jiray suuqyada Ethiopia sida; Alcatel, Pansonic,Uni phone. Shan iyo toban shirkadood ayaa iska diiwaan galiyey wakaalada iskaadhsiinta dawlada si ay u siiyaan Ethiopia shaqada qalabka [pbx].
Waxaa jira alaabooyin kala duwan oo yaala wakhtigan suuqyada Ethiopia, laakiin gabaabsi ah oo u baahan in la soo dajiyo, sidaas waxaa laga soo xigtay Behailu Tsegaye mada waaxda farsamada ee isgaadhsiinta Edon oo ku diiwaan gashan qalabka PBX ee Ethiopia.
Waxay noqon doontaa muhiim in wax soo saarayaashu aduunku ay ka qayb galaan horumarinta iyo kobaca suuqyada dalka Ethiopia.
Waxaa si xawliya ugu qulqulaya dalka Ethiopia shirkado caalami ah oo doonaya in ay maal gashadaan qaybaha kala duwan ee wax soo saarka iyo iibinta qalabyada ay warshadahoodu soo saaraan. Arintaas oo ay keentay isbadalka korodhka dhaqaale ee dalku ku talaabsaday sanooyinkan dambe.
Maalintii Saddexaad Mudaharaad Boorama ka Socda